Ifulethi eline-Sunny-loft elinendawo yokuphumula yangaphandle - I-Airbnb
Ifulethi eline-Sunny-loft elinendawo yokuphumula yangaphandle
Indlu encane ibungazwe ngu-Lilly
U-Lilly Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle, elinelanga, eline-loft elinezinto eziningi. Ikhishi, igumbi lokugezela, igumbi lokulala lesitayela se-attic eline-TV ne-AC kanye nelungiselelo lokuhlala ngaphandle elinethezekile elibukeka ezindongeni zaseVenice zedolobha. Indawo ephephile eduze kwezindonga zedolobha kanye nebanga elihamba ngezinyawo emizuzwini eyi-10 ukusuka enkabeni yedolobha. Izitolo ezinkulu nezindawo zokudlela eziseduze ukuze uhlale ongenakulibaleka. Ilungele imibhangqwana noma izivakashi ezingashadile ezifuna ukuhlola i-Crete. Izivakashi ezinde zingase zingakhululeki kakhulu.
Kukhona ikhishi elincane lapho ungapheka khona, ulungise ukudla kwakho kwasekuseni njll. Indawo yokuhlala ingaphandle kodwa izinga lokushisa likhululekile izikhathi eziningi zonyaka. Kukhona i-drying rack phezu kwethala ongayisebenzisa ngemva kolwandle noma lapho ugeza izingubo emshinini wokuwasha otholakala endlini yokugezela.
4.77 · 66 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala enhle nephephile enokufinyelela kalula enkabeni yedolobha namabhasi. Izitolo ezinkulu ezimbili emizuzwini emi-2 ibanga lokuhamba. Amathilomu amaningi amahle endaweni yokudla kwasekuseni, ikhofi, ubhiya kanye nokudla okulula!
Ngihlala enkabeni yedolobha kodwa ubaba uhlala eduze futhi uzotholakala uma kukhona okuvelayo!
ULilly Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00000844816